Waxa uu ka hor xilliga qaboobaha in Yeeyi Cunto in Holm | Holmbygden.se
Posted on 27 September, 2013 by Holmbygden.se
Life Dabiiciga ah oo toosni ah gurguurta. The horay u dhow Holm dabiiciga ah uu leeyahay dhowr aragtida ilaashadaan qalaad. Isbuucaan Yey loo arki karaa dhexe ee Anundgård, Holm.
In tuulada oo ay u dhow, ayaa dhawaan lagu arkay orso tuulooyinka. Laba todobaad ka hor sköts Oo weliba Björn weyn i Liden. Wax hore ahaa mid aad u dhif ah. Read maqaalka ST.
Bishii August, waxaa sidoo kale jiray Lynx xaq agagaarka shirqool in Gimåfors, dheehan a canshuurta beer lagu dilay.
* Lynx ayaa sawirka uu leeyahay waxba kuma laha wixii ay.
Xataa dhib badan ku garaacday, si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd in habeenkii Sabtida loo arki karaa in Yeeyi Cunto a i Anundgård. Waxaa inta lagu jiro fiidkii socod ah in a dadka deegaanka oo kaliya dhowr mitir u arkay cabbayso xayawaan waaweyn kaniisadda Holm ayaa. in Yeeyi Cunto A la dabada guumeyso weynaa ka dhaqaaqin dhexe ee tuulada. In daqiiqad labadaba waxay lahaayeen xiriirka indhaha iyo baabuurka ku marayay joojiyay iyo sidoo kale Raalli ahaanshaha ilaashadaan arkaysid. Markaas ayay ka dhigay in Yeeyi Cunto rajo dhab ah deyr kiniisadda oo la waayay xagga woqooyi la wada dhaqdhaqaaqayeen a inching ilaa xagga dugsiga.
Maxaa Yeeyi ahaa ee kaniisadda in ay sameeyaan ma cadda. Waxa suurto gal ah booqashadii ugu ahaa nooca diineed ama booqasho in ay ciidda kasta oo ku lifaaqan yaqaan? Waxaa laga yaabaa in ay jirto orso aasay…
Bandow ama dalxiis u socoto
arrin A hadda waa sidaa cad haddii ay khatar tahay in la tago dibadda habeenkii. Wolves, si kastaba ha ahaatee, waa mid aad u dhif ah khatar ugu ah dadka, iyo, taariikh ahaan, kaliya diiwaan qaar ka mid ah enstaka vilda vargattacker under 1700- iyo 1800-hore. Mid ka mid ah rajo tahay in ay tani kaa caawin karaa degmada la socodka kordhaysa oo ah dalxiisayaal iyo taageerayaasha oo doonaya in ay qabsadaan bidhaamaysa in Yeeyi. Waxaa laga yaabaa in shirkadda maxalliga ah ee dibadda Trading galay diyaarin tours ku Holm la Safari in Yeeyi Cunto mustaqbalka.